Obbo Baqqalaa Hospitaala Dhunfaatti Geessuu Mannaa Doktoora Kliinika Dhunfaa Mana Hidhaa Qaallitti Geessan. Abukaatoo
Guraandhalaa 02, 2018
Baqqalaa Garbaa, ittti aanaa dura ta'aa KFO. Istuudiyoo 'NPR' Waashingtan Diisitti argamuutti gaafii fi deebii oggaa godhu, Hagayya, 2015
Obbo Baqqalaa Garbaa dhukkuba ija isaanii miidhe hospitaala dhuunfaa “Biruh Vision” jedhamu dhaquun akka wal’aanaman hakiimni Hospitaala Minilik ajaja kennuu kaleessa gabaasnee turre.
Garuu, Manni-hidhaa Qaallittii hidhamtoota gara hospitaala mootummaatti malee kan dhuunfaatti hin erginu jechuu isaatiin kan ka’e Obbo Baqqalaan amma illee wal’aansa hatattamaan argachuun irra ture hin arganne jedhu Abukaatoon isaanii.
Abukaatota isaanii keessaa tokko ka tahan Obbo Abdu-jabbaar Huseen akka jedhanitti hakiimni dhaabbata fayyaa dhuunfaa kan hakiimni hospitaala minilik ajajeen ala tahe Hospitaala Mana-hidhaa Qaallittii deemuudhaan ija Obbo Baqqalaa ilaalee jira.
“Kliinika Waagaa” jedhamu irraa dhufan kan Dr. Amaanuu’eel ija Obbo Baqqalaa eega ilaalanii booda wanni irra ga’an isuma hospitaalli Miniliik jedhe waliin wal fakkaataa ta’u Obbo Abdujabaar ibsanii hatattamaan wal’ansa fayyaa hin argatan taanaan midhaa hanga gonkumaa arguu dhabuu akka ga’u Obbo Baqqalaatti himan jedhan.
Doktoorichii Wal’ansa ija bitaa kanaaf qarshii kuma kudhan kan gaafatan yoo ta’u manni hidhaa Qaallitti kana kennuuf hin ehamnee Obbo Baqalaanis lafa hospitaalli Miniliik ajajeen ala dhaquun wal’anamuu akka hin feene ibsanii jiru jedhan.